Umculi wase-Ukraine uAndrei Danilko watshela iphephancwadi elithi "Iimfihlelo zeenkwenkwezi" ngobomi bakhe bodwa ngaphandle kokufihla.
- Andrei, ngaba unayo naziphi na iingcebiso ezivela kubapolotiki ukujoyina iqela labo?
"Bangaphi!" Ngokuqala oko kwenzeka emva kwe-Eurovision. Kwakukho intsikelelo yokuthandwa! Sasifuna kakhulu ukudala iqela likaVerka Serduchka, njengoko ndathi, "ukuthatha izifumbathiso nokuzinika abantwana." Kodwa ngomzuzu wokugqibela ndayekanga yonke into, kuba ezinye zaqala. Ndaqala ukunikela ngemali engcolileyo ukuba ndihlale nabantu abathile, kwaye ndathi: "Andrew, yima!
- Nawaphi na ezopolitiko ozithandayo?
- Ndibavelana nabo njengabantu, kungekhona ikhosi yabo. Andiqondi oko umongameli wethu athetha ngoku ngoku. Kuya kwenzeka, ndiphulaphula ngokukhethekileyo ukuqonda, kodwa andinako. Ndingaba budenge? Iimpawu ezininzi ezintle, kodwa akukho nto. Ndiyichukumise gqitha iKuchma. Uphila. Ndiyathanda kakhulu u-Putin. Xa ephendula imibuzo, ndikhangeleka kumboniso. Babuza - andizange ndiyiqonde loo mbuzo! - kwaye ukhumbule amanani, kwaye bekunjani, kwaye yintoni, kwaye phi - i-aerobatics! Ndiyathanda kakhulu iGrbachev.
- Ndixelele, ngaba kukho ukuzimela kwintengiso?
- Kukhona inzala. Iqela. Kodwa akukho ubundlobongela. Lapha u-Oleg Violin uxelela wonke umntu ukuba akavunyelwe ukucula iingoma zase-Ukraine. Ewe, ngubani onganiki? Makhe ahlabelele, avuselele. Yintoni, umntu ombambe ngesandla? Vumani! Kufuneka kube ngandlela-thile umdla. Ewe, masivuselele iivili zase-Ukraine ngoku! Kutheni sifanele siqhube iMercedes? Masihambe enqoleni!
Ndizisola kukuba andinayo imfundo
- Ngokufanelekileyo. Andikhululekile kwimizila yeemoto. Andiqinisekanga ukuba umntu owenza amalungiselelo kum uya kwenza okufanelekileyo. Iibhanti zitshisa, kufuneka uziguqule ... Ubomi obuqhelekileyo ...
- Wathini na, ujikizela ama-bulb?
- Umqhubi ujika. Ndiyakwazi ukuzipheka. Nangona ndinomfazi oza aze ahlambulule ngosuku. Ndiyathanda ukuba nomyalelo endlwini yam. Kodwa emizuzwini emihlanu ndenza loo nto!
- Yintoni ongenalo ukufumana ulonwabo olupheleleyo?
- Yonke into ekuthandwayo yaqala kwangaphambili kwaye ingandinika ithuba lokufunda ngokuqhelekileyo kwisiko. Ndizisola ngokuba andinayo imfundo yecandelo lezemfundo okanye lezemfundo. Ukwenza ifilimu, kufuneka ufake isakhelo esinye nesinye, ukwazi iifomula. Kwaye andazi. Ndiyakwazi ukumba, kodwa kuya kuba kude kakhulu. Andikwazi ukuhamba kwintetho. Kwimi, isimo sengqondo siya kuhlaselwa okanye siphephe. Ngaphezu koko, ndihleli ndinamahloni. Yaye wonke umntu uya kumnceda khona ngomnwe.
- Kutheni unobomi bomntu?
- andiyiqondi indlela oku kwenzeka ngayo. Andiqondi ukuba abantu bangayazi njani kwi-intanethi. Ngoku andinayo indawo yokuba ndizazi ngayo. Ndijikeleze - abanye oogxa. Kwaye malunga nabo? .. Andizange ndiye kwizinsuku zokuzalwa ixesha elide. Ngokuqinisekileyo, ndiza kufumana iinkampani ezintsha, apho zikhangela khona, uzibethele kwaye uyazisola ... Kwaye ndaza ndisela - kwaye sele ndingenanto into, wonke umntu uye waqhawula. Ndiyekile ukukufotela kwifowuni, ngoko ke ndibonise iifoto ezidibeneyo kumama, utata, umalume okanye umthandi ...
- Akukho mvakalelo yokuba umfanekiso we-Serduchka usuvele ugocekile?
-Aye. Intliziyo ikhula. Waba ngumfashane, wahlabelela kangcono. Yayimvelaphi, akukho mntu ubeka inkwenkwe ekhanda phambi kwayo. Le yona nqopu eyona nto ndiyenayo. Ayikho i-rose - yonke into engenangqondo ... andisakwazi ukuqonda indlela abantu abanokuthanda ngayo "i-CB boniswa." Kwakungekho ncoko, iinqwelo ezibi ... Kodwa ubuhle bokuba ngaphambi kokuba oku kungekho. Kwaye ngelo xesha kwakunjalo ekuqaleni. Kwaye wonke umntu uyaqonda: abantu bahleli emotweni, umqhubi ungene, uthetha nantoni na waya kulala. Ndiyingozi apho, kodwa lo mbuzo omnye. Ndixelelwe wonke umntu: ziphi amehlo akho ezibuhlungu! Thixo, yintoni amehlo ebuhlungu? Andizange ndilale ngokwaneleyo, ngoko ndibona amehlo abuhlungu.
Wena kum - kungekhona utitshala oyintloko, kwaye andisayi kufunda esikolweni
- Ndiyakhumbula ukuba uthe umntu kufuneka ahlolwe ubuncinane kanye ngonyaka. Ngaba oku kwenzeka ngezenzo?
- Kulula kakhulu ukucebisa abanye. Kungenxa yam. Ndiyakwazi ukusho: bafana, jonga impilo yakho, kwaye uninzi olunamathela kule nto kunzima kakhulu. Ndaye ndafuna ukuba ngugqirha njengomntwana, ngoko andizange ndibe nesaba. Ndifuna ukuba ngugqirha, ndinqumle. Andizange ndiyidelele igazi okanye izidumbu. Senze iilenki kwiidonki. Kwaye idonk kufuneka iguqulwe. Nangona kunjalo, yintoni onokuyibona apho, akukho nto apha? Ubuntwaneni bebuhlobo oluthile lobuphambuko. Yintoni ongenakuyithetha ngokutsha ... (ihleka.)
- Akubonakali ukuba kunzima ukufumana isiqingatha sesibini kunye nobudala?
"Andiyicingi njalo." Awufuni ukukhangela. Olunye uthando ngo-18 - ufa, unokuziphosa kwisitezi sesithoba. Kwaye kwiminyaka eyi-25 kunye ne-30 - eyahluke ngokupheleleyo, uthando oluhlukileyo. Akunamandla. Kodwa ngandlela-thile uziva ukhuselekile malunga nalo. Ngenye indlela, ukwakha ubudlelwane. Uyaqonda ukuba into engcono ukuba ungayenzi, kwindawo ethile ufanelekile ukugcina ucebile - kwaye ngomso yonke into iya kulungeleka.
- Umfanekiso wowesifazane onokumthanda utshintshile?
"Andizange ndibe nomfanekiso." Yonke inxulumano endiyenayo, kwakungekho baninzi kubo, baqala ngobuhlobo novelwano. Andikhathalele ukuba ku-jeans okanye kwi-skirt. Ngokuqinisekileyo konke okufanayo.
- Unokukhawuleza kangakanani ukuya kulwalamano olusondeleyo?
- Unokwenza ububudenge ngemizuzu eyi-15, emva kokusela. Kwaye kwenzeka ukuba olu budenge, njengoko ucinga, lukhokelela kumhlobo. Ngaphambi kwam, mbulela uThixo, kwaqala kwangaphambili ukuba akufuneki ukuphulaphula umbono wendlu yangasese. Andiyithandanga ncamvo ngombono womntu: indlela endigqoka ngayo, nokuba ndenza okulungileyo okanye kakubi. Wena kum - kungekhona utitshala oyintloko, kwaye andisayi kufunda esikolweni.
IKartsev kunye neArkanov - njengababamkhulu amabini
- Kodwa ngaba kukho izigunyazo oziphulaphulayo?
- Kakade, ndinomdla kwimbono yabantu abanjengawe. Andinomdla kwimbono, umzekelo, we-Roman Kartsev. Ndiyamthanda njengomculi. Kodwa andinakuyibona njengomntu. Ngomnye umboniso wandixelela ixesha elide ukuba ndandiyingozi kangakanani, indlela endandiyilungele ngayo. Ewe, mhlawumbi ndingumtsalane. Kunene, ndenza oko ngokwam. NoArkanov - kukho. Njengababini boogogo. Bahlala phantsi ebhentshini baza bahleba: "Nanka amantombazana, baphuma ngeengubo ezimfutshane. AbaProfeti! "Baye baphupha ukuhamba ngale ndlela, kodwa abanako. Ndiyayiqonda isizathu sokuba bathethe njalo. Emva koko, abakwenzayo ngoku, ngokubanzi, akudingeki. Basebenzisa ukuphuhliswa kwabo babekude kwixesha elidlulileyo. UThixo uyabanika impilo. Andizixoshe. Kodwa kukho isibonakaliso esinye: impumelelo kunye nokungaphumeleli. Nceda, ukuqokelela ibhotwe lezemidlalo. Nangu ke umntu olungileyo! Kwaye nihamba niyakhalazela, nantoni na into embi ...
- Xa ukhangela ibhinqa, yiyiphi ingqalelo ngokuyinhloko?
- Kakade, kuqala kuvela uvavanyo jikelele. Apha amadoda ahleliyo athi: "Khangela, oku kuhambe." Okanye ibinzana elithi: "Nangu bonke abantwana, njengabantwana, kunye nam ..." Ndixhalabile kwiintetho ezinjalo. Yingakho andithandi imitshato! Bonke badlale khona! Ukuqala kumama, okhalayo. Kutheni ukhala? Ekugqibeleni omnye umntu wathabatha i-cuttlefish yakho! Utata uya kunxila, kuba wanikela intombi yakhe. Olunye utywala obalaseleyo ...
Umama wanikela umnxila
- Umtshato waseRashiya waseUkraine uhlukile kakhulu?
"Akunjalo." Ngomntu wonke usela. Enye kunye ne-repertoire efanayo iyaculwa. Xa sele sele utywala ngokupheleleyo, kuquka uSerchchka. Maye sidume. Bathi i-pop, kubi! Kodwa andikaze ndibone umntu edibana emishadweni ... Strauss.
- Yaye yintoni ibali kunye nomama wakho, ngubani owafake ipaparazzi?
- Babhala ukuba umama wayephantse ehlala kwindlu, ethatha umfanekiso we-dacha yethu. Kwaye umama usetshini. Wayejonga, ngokuqinisekileyo, njengomnye utywala ... Ewe, bathini abantu kwi-dacha (ngesi-Ukrainian "bahamba" - Ed.)?
- Ngubani kunye noAndrei Danilko abanokubelana ngokufihliweyo? Kukholelwa ukuba indoda kufuneka yakha indlu, ityala umthi, yindodana ... Awuyicinga ntoni ngabantwana?
"Andinayo imfihlelo yokuwabelana nabo." Andizange ndakhe indlu. Ndinezindlu. Ndingathini ukuba ndifuna ukuba nabantwana? Kufuneka ihlakulele ngokwabo ngandlela-thile. Wonke umntu unikezelwa isigqibo sakhe. Bathi umntu unokunika ubomi obutsha kwiminyaka engama-40 nangama-60. Kwaye kwafika kwi-60 ndisaba nexesha.
Biography ka Nina Dobrev
I-Verbinski iya kutshintsha iDepp
UPablo Picasso, i-short biography
I-video eyaziwayo yase-Ukraine: i-Katya Tsarik
UPeter Dranga, ubomi bomntu kwaye uyatshata?
Iingcebiso zengqondo zebhenqa
Iimpawu eziwusizo zeeyi
Iinkcukacha eziqaqambileyo: iimboli ezinemibala - i-2016
Iimpawu zobunqunu besifazane
Umyeni ngeyure? Hayi, ngenxa yobomi!
I-Wraps kunye nobusi kunye nesardadi
Imfundo yabantwana kwi-nursergarten
Sandwich ngeentlanzi kunye ne-sauce
Ziziphi iintlobo zeembadada zokukhetha umntwana ngexesha elide?
Macaroni kunye nebhekoni, mozzarella kunye neetatayi
Indlela yokunyanga i-lymph nodes entanyeni?
Mfutshane kunye nenkukhu
Popovy nge ngqolowa kunye anyanisi
Inyosi enamafutha e-Italian